Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo isha ku haya inuu lasoo saxiixdo Raphael Varane Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo isha ku haya inuu lasoo...
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo isha ku haya inuu lasoo saxiixdo Raphael Varane
Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa lagu soo waramayaa inuu xiiseyneyso keenista xiddiga Raphael Varane ee Real Madrid .
Qandaraaska ciyaaryahanka reer France ee Los Blancos ayaa dhacaya 2022, waxaana lala xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda bilihii la soo dhaafay.
Sida laga soo xigtay The Manchester Evening News, qiimaha Raphael Varane ayaa ku soo biiri kara kooxda marka loo eego inuu heshiiskiisa Real Madrid ka harsan yahay wax ka yar laba sano. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in Manchester United ay ugu cad-cadahay saxiixa daafaca dhexe.
Raphael Varane ayaa Real Madrid kaga soo biiray kooxda Lens xagaagii 2011. Waxa uu noqday mid ka mid ah daafacyada ugu fiican ee jiilkiisa intii uu joogay caasimada Spain.
27 jirkaan ayaa door muhiim ah ka ciyaaray kooxda, isagoo kula guuleystay afar koob oo Champions League ah, seddex La Liga, afar Fifa Club World Cups iyo Copa Del Rey tobankii sano ee uu joogay Real Madrid.
Raphael Varane ayaa wali xubin muhiim ah ka ah kooxda Zinedine Zidane laakiin wargayska Mundo Deportivo ayaa sheegaya in xiddiga ku guulaystay koobka adduunka uu ka fiirsanayo in uuna heshiiska u cusboonaysiin kooxda Real Madrid.
Manchester United ayaa la sheegayaa inay si dhow ula socoto xaalada qandaraaska daafaca ee kooxda Real Madrid. Waxaa la sheegay inuu ku jiro liiska ugu sareeya ee liiska Ole Gunnar Solskjaer ee xagaaga iyadoo tababaraha reer Norway uu doonayo inuu la soo saxiixdo daafac tayo sare leh si uu Harry Maguire ula wadaago wadnaha daafaca Manchester United.
Previous articleTaariikh-da 10 Ciyaaryahan ee ugu Feecnaa Khadka Dhexe ee kubada Aduunka
Next articleKadib dhaawicii Neymar waa kuma xidiga kale ee ugu halista badan PSG.